Barnaamijka EcoFellowship - Xarunta EcoTechnology
Barnaamijka EcoFellowshipXarunta EcoTechnology2022-02-22T15:35:15-05:00
Codsiyada 2022-2023 Barnaamijka EcoFellowship hadda waa xidhan yihiin.
Barnaamijka 'EcoFellowship Program' waa boos mushaar bixineed oo 11 bilood ah oo lala shaqeynayo shaqaalaha CET iyo EcoFellows kale si loo fuliyo howlo badan oo la xiriira dadaallada waxqabadka cimilada iyo barnaamijyada waxbarashada.
EcoFellows waxay taageertaa dadaallada CET si loo caawiyo dadka deegaanka, ardayda, hay'adaha iyo ganacsiyada gobolka oo dhan barnaamijyada socda ee ku saabsan waxtarka tamarta, adeegyada tamarta guriga, tamarta la cusbooneysiin karo, iyo yareynta qashinka iyada oo loo marayo dib-u-warshadaynta, dib-u-isticmaalka iyo isku-darka.
EcoFellowship waa a fog booska, oo leh fursad shaqo shaqsiyeed ikhtiyaari ah iyadoo kuxiran tilmaamaha badbaadada.
Ku saabsan Barnaamijka & Codsiga
CET waxaan ka dhignaa cagaaran macno. EcoFellow ahaan, waxaad naga caawineysaa inaan abuurno saameyn la qiyaasi karo. EcoFellows waxay u shaqeeyaan iskutallaab ahaan, iyagoo si gaar ah diiradda u saaraya wacyigelinta bulshada iyo kaqeybgalka, isgaarsiinta, iyo gorgortankayaga 'EcoBuilding Glains' oo dukaamada qalabka dib loo soo ceshaday. EcoFellowship waa a fog booska, iyadoo shaqsiyan loo doorto ikhtiyaar iyadoo kuxiran tilmaamaha CDC.
Waxaan bilaabaynaa aqbalida codsiyada bisha Janaayo. Codsiyada waxaa si toos ah looga aqbalaa annaga bogga shaqada.
Musharrixiinta waxay soo gudbinayaan warqad dabool ah, dib u bilaabid, iyo muunad qoraal ah oo 200-erey ah.
Musharixiinta la xushay waxay leeyihiin wareysi xog-wareysi kooban iyo dulmar guud, waxaana ku xigta wareysi lala yeelanayo guddiga shaqaalaynta.
Jihaynta laba toddobaad ah
Fursadaha horumarinta xirfadeed ee billaha ah
Fursada kaqeybgalka shirarka
Xiriirinta iyo horumarinta shaqada
Mushaharka EcoFellowship iyo Faa'iidooyinka:
EcoFellowship waxay bixisaa $17 saacadii 40 saacadood usbuucii (muddada barnaamijka) sida heerka aasaasiga ah, iyada oo la hagaajinayo qiimaha nolosha iyadoo ku xiran goobta, oo leh $2,000 dheeraad ah oo gunno ah marka barnaamijka la dhammeeyo. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah: caymiska caafimaadka; buka, fasaxa iyo fasaxa la bixiyo; 403 (b); Sahayda iyo lacag celinta masaafada, iyo sidoo kale qorshaha lacag celinta taleefanka gacanta.
“Fursadaha horumarinta xirfadeed iyo hagidda xirfadda waxay EcoFellowship -ka kaga duwan yihiin shaqo kasta oo joogto ah, sida heerka shaqada ee EcoFellows lagu aamminsan yahay ay uga soocday goob shaqo oo caadi ah. Ahaanshaha EcoFellow micnaheedu waa inaad haysato nidaam taageero oo shaqaalaha CET agtaada ah oo ay ka go'an tahay inay kaa caawiyaan inaad noqoto hoggaamiye xagga deegaanka. "
“Aad ayaan ugu mahadcelinayaa CET oo aan leeyahay waayo -aragnimada EcoFellowship. Aad bay ii caawisay inaan yeesho faham adag ee isgaarsiinta iyo naqshadeynta garaafka doorkayga hadda. Waxaan kaloo jeclahay sida ay ugu dhowdahay kooxdayda EcoFellow weli! Dhammaanteen 5teennu waxaynu qabsannaa dhowrkii biloodba mar waxayna ahayd mid waxtar leh, hadda iyo inta aan ku jirno Wada -shaqaynta, in la helo koox isku fac ah oo is -kaalmeysa oo keliya maahan nolosheenna gaarka ah laakiin sidoo kale inta aan ballaarineyno xirfadahayaga oo aan qaadno tallaabooyinka xiga nolosheena. ”
“Wehelnimadan waxay leedahay fursado badan oo ii oggolaaday inaan ogaado waxa aan doonayo inaan ku sameeyo waxbarashadayda iyo mustaqbalkeyga mustaqbalka. Waxa ugu weyn ee ku saabsan Wehelnimadu waa sida uu sannad u jiro. Haddii aan go'aansado inaan sii wanaajiyo xirfadayda deegaanka, ma aha oo kaliya inaan leeyahay waayo -aragnimo xirfadeed, laakiin waxaan helay xirfado cusub oo si weyn u kordhiyay horumarinta xirfadeyda. Khibradda oo dhan ee noqoshada EcoFellow waa mid gaar ah, soo jiidasho leh, iyo wax kasta oo ka sii yaab badan! ”
"Waxaan ku biirey EcoFellowship -ka si aan ula kulmo shaqooyin cusub oo waara oo aan helo xirfado aan u baahanahay inaan hore u socdo… Haddii aad noqoto hoggaamiye deegaan mustaqbalka ah waa himiladaada, EcoFellowship -ku waa dhagaxa tallaabada weyn si aad u kobciso xirfaddaada!"
“Si ka duwan jagooyinka heerka gelitaanka caadiga ah, waxaan helayaa fursad aan kaga shaqeeyo mashaariicda saamaynta leh si dhow oo faahfaahsan. Jawiga hufan ee dhiirrigelinta leh ee CET ayaa ii oggolaaday inaan fahmo qiimaha iskaashi iyo bulsho isku xirnaansho leh. ”
“EcoFellowship -kan ayaa ii oggolaaday inaan abuuro waayo -aragnimadayda oo runtii aan u habeeyo danahayga. CET runtii waxay danaynaysaa waxa aan danaynayno waxayna naga caawisaa gaaritaanka yoolalkaas. ”
“EcoFellowship -ku waa fursad qaas ah marka la barbar dhigo shaqooyinka kale ama layliyo sababta oo ah waxaa naloo dhiibay mas'uuliyad aad u weyn waxaana la ilaaliyay filashooyin aad u sarreeya, halka sidoo kale la siiyay tilmaam iyo taageero inta aan baraneyno xirfado cusub. Waxaan dareemayaa nasiib badan inaan ka mid noqdo barnaamijkan cajiibka ah! ”
“Haddaan ka soo baxo kulliyadda, waxaan u malaynayaa inay tahay wax aan caadi ahayn in la helo shaqo halkaas oo aad ku lug leedahay waayo -aragnimo shaqo oo aad u kala duwan, oo ahdaaftaada iyo danahaaga si aad ah isha loogu hayo. EcoFellowship waa kala -guur cajiib ah oo u dhexeeya kulliyadda iyo xirfadda, waxaana na siiya isku -dhafan dhammaystiran oo hagid ah iyo lahaanshaha shaqsiyeed ee shaqada aan qabanno. Qof kasta oo jooga CET dhab ahaantii wuu daneeyaa koritaankeena labadaba deegaanka ahaan iyo bini -aadam ahaanba. ”
“Mawqifka EcoFellowship waa kala -guur weyn oo u dhexeeya kulliyadda iyo shaqada oo waxaan sii wadaa inaan barto oo koro maalin kasta iyo maalin kasta. Shaqaalaha CET waa kuwo saaxiibtinimo leh, caawiya, oo aad u shaqeeya, runtiina waxaan ku raaxeystaa shaqadayda CET. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa waayo -aragnimada si aan saameyn la taaban karo ugu yeesho bulshada igu xeeran. ”…
Avery Cross, EcoFellow '18
“Wehelnimadan waxaa ka buuxay waayo -aragnimo abaal -marin leh, laga bilaabo maalmaha horumarinta xirfadda ilaa bandhigyada, laga qoslo dadka la shaqeeya ilaa maalmaha shirarka. Haddaan nahay EcoFellows, waxaan si joogto ah u helnay xirfado cusub, oo aan la kulannay fursadaha isku -xirnaanta, waxaana soo dhoweeyay shaqaalaheenna. ”
“Wehelnimadani waxay ii dejisay halbeeg ku saabsan sida bay'ada shaqadu u shaqaynayso; qof kastaa wuu naxariis badan yahay, caawiyaa, taageeraa, oo aan xukumin, isla mar ahaantaana soo saara shaqo si hufan oo xirfadaysan. In lagu aamino mas'uuliyad aad u badan shaqada heerka gelitaanka waa dhif, sidaa darteed inaan mudnaantaas ku yeesho CET waxay iga caawisay inaan kobo shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba. ”
"Barnaamijkan lacag-bixinta ah, ee 10-bilood ah waa hab wanaagsan oo lagu helo xirfado iyo waayo-aragnimo qiimo leh oo la xiriira hufnaanta tamarta, ilaalinta kheyraadka, iyo joogtaynta, iyo sidoo kale hagidda qorshaynta xirfadda iyo horumarinta xirfadda."
“Wehelnimadu waa fursad la yaab leh oo wax badan laga barto ku-oolnimada tamarta, yaraynta qashinka, iyo shaqada kale ee la xiriirta joogtaynta iyada oo kor loo qaadayo xirfadaha iyo waayo-aragnimada xirfadeed. Wehelnimadu waa mid u gaar ah in ay bixiso dheelitirnaan weyn oo u dhaxaysa si buuxda oo u shaqaysa waqti buuxa, iyo helitaan aragti dheeri ah, oo ii oggolaanaysa in aan sahamiyo waxa aan aad ugu jecelahay gudaha deegaanka deegaanka. Dhammaan inta aan la shaqeynayo qaar ka mid ah dadka la shaqeeya ee aadka u taageera oo naxariis leh! ”
“EcoFellowship-ku waa fursad mar uun noloshaada ku siineysa mas'uuliyadda shaqo waqti-buuxa ah iyo xorriyadda inaad sahamiso danahaaga shaqo. Waxay ii ahayd boodh la yaab leh oo ka booday xirfadeyda waxayna i siisay marin aan ku helo shabakad dhan oo dad ah oo iga caawisay jidka. Xaqiiqdii anigu ma joogi lahaa meesha aan maanta joogo haddii aan lahayn Barnaamijka EcoFellowship! ”
“Runtii ma codsan karin tallaabada ugu horreysa ee ugu wanaagsan xirfadeyda isla markaan kulliyadda ka baxo. CET waxay i siisay isku dheelitirnaan aan caadi ahayn oo mas'uuliyad iyo saameyn oo ay weheliso la -talin iyo tababar. ”
EcoFellows waxay ka shaqeeyaan guud ahaan dalka meelo kala duwan. Waa kuwan halka ay in yar uun ku dhammaadeen.
Farsamadii Molly '20
Waad ku mahadsan tahay Taageerayaasheena deeqsinimada leh: